Ọha Ahụike Ọha na Ọha
Thrips siri ike igbu? Methodszọ ndị a ị nwere ike ịnwale
Thrips bụ otu n’ime ahụhụ ndị ọrụ asị kacha ewute ndị mmadụ, n’ihi na ha na-eri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri niile, ma belata mmepụta ihe ọkụkụ. Yabụ enwere ụzọ ọ bụla dị irè? Kedu otu esi eji ya n'ụzọ ziri ezi iji mee ka mmetụta ahụ ka mma? Thrips siri ike igbochi ma gwọọ ya. Nke mbu, nghota nke ...
Trendsfọdụ ọnọdụ maka ọgwụ ahụhụ
Nkebi 1: Nwelite kwa izu nke China pesticides raw material prices. Site na oge ahịa na-abịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-amalite ịzụrụ, chekwaa ma mepụta. Ebe ọ bụ na usoro ndị a niile na-eme n'oge gbasiri ike, ụlọ ọrụ mmepụta ihe eripịawo ngwongwo nke ụfọdụ ngwaahịa na ihe ...
Awiner-ulo oru ogwu na-egbu ogwu
Nkọwapụta SHlọ ọrụ SHIJIAZHUANG AWINER BIOTECH CO., LTD bụ ụlọ ọrụ agrochemical ọkachamara nke na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ agrochemical, ọkachamara na Insecticides, Herbicides, Fungicides, PGR na ngwaahịa na-achịkwa pest na inyefe ọtụtụ usoro: EC, SL, SC, WP, SP, WDG, EW, FS, ULV wdg ...
Banyere anyị-ọrụ na mma
Q1: have nwere asambodo ọ bụla gbasara ọgwụ ahụhụ? Azịza: Ee. Q2: Otu esi akpọtụrụ anyị? Pịa Alibaba “Kpọtụrụ soplaya” Ma zitere anyị ozi ngwaahịa ịchọrọ, ị ga-enweta zaghachi n'ime awa 24. Q3: Kedu maka ọrụ gị? Anyị na-enye 7 12 awa ọrụ, na wh ...
Tricyclazole 75% WP, Lambda-Cyhalothrin 95% TC, Cyromazine 75% WP, Ihe oriri, Abamectin 3.6% EC, Emamectin Benzoate 70% TC,